Mpitsara 7 | Baiboly | Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao (2008)
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Alemà any Pennsylvanie Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Batak (Karo) Batak (Toba) Bengali Bichlamar Bicol Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Ga Galicienne Goujrati Goun Grika Guarani Géorgien Hebreo Hiligaynon Hindi Hindi (Romanina) Hiri Motu Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Isoko Italianina Japoney Javaney Kambôdzianina Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Koreanina Kosrae Kreôla any Haïti Kroaty Letonianina Lingala Litoanianina Luganda Lunda Luo Luvale Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Motu Myama Navajo Nias Norvezianina Nzema Népali Oromo Ossète Otetela Ouzbek Ouzbek (Romanina) Ouïgour (Sirilika) Pangasinan Papiamento (Curaçao) Pendjabi Pendjabi (Romanina) Persianina Poloney Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Huallaga Huánuco) Romanianina Rosianina Samoanina Sango Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Soundanais Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tajiki Tamoul Tatar Tenin’ny Tanana Albaney Tenin’ny Tanana Alemà Tenin’ny Tanana Alemà Soisa Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Aostralianina Tenin’ny Tanana Aotrisianina Tenin’ny Tanana Bolivianina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Britanika Tenin’ny Tanana Espaniola Tenin’ny Tanana Flamand Tenin’ny Tanana Frantsay Tenin’ny Tanana Frantsay Belza Tenin’ny Tanana Grika Tenin’ny Tanana Holandey Tenin’ny Tanana Hongroà Tenin’ny Tanana Indianina Tenin’ny Tanana Indonezianina Tenin’ny Tanana Irlandey Tenin’ny Tanana Israelianina Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Jamaikanina Tenin’ny Tanana Japoney Tenin’ny Tanana Kenianina Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Koreanina Tenin’ny Tanana Kroaty Tenin’ny Tanana Malagasy Tenin’ny Tanana Malezianina Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanana Myama Tenin’ny Tanana Nikaragoanina Tenin’ny Tanana Nizerianina Tenin’ny Tanana Orogoayanina Tenin’ny Tanana Panamianina Tenin’ny Tanana Paragoayanina Tenin’ny Tanana Perovianina Tenin’ny Tanana Poloney Tenin’ny Tanana Portogey Tenin’ny Tanana Romanianina Tenin’ny Tanana Rosianina Tenin’ny Tanana Silianina Tenin’ny Tanana Sinoa Tenin’ny Tanana Slovaky Tenin’ny Tanana Slovenianina Tenin’ny Tanana Soedoà Tenin’ny Tanana Tailandey Tenin’ny Tanana Tseky Tenin’ny Tanana Venezoelianina Tenin’ny Tanana Zambianina Tenin’ny Tanana any Singapour Tenin’ny Tanan’ny avy any Afrika Atsimo Tenin’ny Tanan’ny avy any Arzantina Tenin’ny Tanan’ny avy any Costa Rica Tenin’ny Tanan’ny avy any Cuba Tenin’ny Tanan’ny avy any Ekoatera Tenin’ny Tanan’ny avy any Ghana Tenin’ny Tanan’ny avy any Goatemalà Tenin’ny Tanan’ny avy any Honduras Tenin’ny Tanan’ny avy any Malawi Tenin’ny Tanan’ny avy any Mozambika Tenin’ny Tanan’ny avy any Nouvelle-Zélande Tenin’ny Tanan’ny avy any Philippines Tenin’ny Tanan’ny avy any Québec Tenin’ny Tanan’ny avy any Salvadaoro Tenin’ny Tanan’ny avy any Taïwan Tenin’ny Tanan’ny avy any Zimbabwe Tetun Dili Ticuna Tigrigna Tiorka Tok Pisin Tongan Tseky Tshiluba Tsonga Turkmène Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Umbundu Venda Vietnamianina Wallis Waray-Waray Xavante Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
7 Ary nifoha maraina i Jerobala,+ izany hoe i Gideona,+ mbamin’ny olona rehetra niaraka taminy, ka nitoby teo amin’ny loharanon’i Haroda. Ny tobin’ny Midianina kosa teo avaratry ny nisy an’i Gideona, teo amin’ny havoanan’i More, teny amin’ny lemaka iva. 2 Dia hoy i Jehovah tamin’i Gideona: “Maro loatra ny olona miaraka aminao, ka tsy hatolotro eo an-tanan’ireo ny Midianina,+ sao hirehareha+ momba izany ny Israely, ka hilaza amiko hoe: ‘Ny tanako ihany no namonjy ahy.’+ 3 Koa manaova antso avo amin’ny olona, azafady, hoe: ‘Iza no matahotra sy mangovitra? Aoka izy hiverina.’”+ Ary nisy fitsapana nataon’i Gideona tamin’izy ireo. Dia olona roa arivo sy roa alina no niverina, ka iray alina sisa no nijanona. 4 Hoy ihany anefa i Jehovah tamin’i Gideona: “Mbola maro loatra ireo olona ireo,+ ka asaivo midina ho eny amoron-drano ry zareo fa hisy fitsapana hataoko aminy eny. Koa izay lazaiko aminao hoe: ‘Hiaraka aminao io’, no hiaraka aminao. Fa izay lazaiko hoe: ‘Tsy hiaraka aminao io’, dia tsy hiaraka aminao.” 5 Dia nasain’i Gideona nidina teny amoron-drano ny olona.+ Dia hoy i Jehovah tamin’i Gideona: “Atokàny izay rehetra milelaka rano, toy ny filelaky ny alika, ary atokàny koa izay rehetra mandohalika hisotro.”+ 6 Ary telonjato lahy no naka rano tamin’ny tanany ho eo am-bavany ka nilelaka izany, fa ny sisa rehetra kosa nandohalika rehefa nisotro. 7 Hoy koa i Jehovah tamin’i Gideona: “Ireo telonjato lahy nilelaka rano ireo no hamonjeko anareo, ary hatolotro eo an-tananao ny Midianina.+ Fa asaivo mody kosa ny olona sisa rehetra.” 8 Koa nalain’ireo telonjato lahy ny vatsy sy ny anjombona+ teny amin’ny olona. Dia nalefan’i Gideona hody tany an-tranony avy ny lehilahy israelita rehetra, fa ireo telonjato lahy kosa no nohazoniny. Ary ny tobin’ny Midianina dia teny ambanin’izay nisy an’i Gideona, teny amin’ny lemaka iva.+ 9 Ary hoy i Jehovah tamin’i Gideona, tamin’iny alina iny:+ “Mitsangàna, ary midìna ka tafiho ny ao an-toby, fa natolotro eo an-tananao izy.+ 10 Fa raha matahotra ny hidina ianao, dia ento midina miaraka aminao ho any an-toby i Pora mpanomponao.+ 11 Ary henoy izay horesahin’izy ireo+ fa hihamahery ny tananao aorian’izay,+ ka hidina hanafika ny ao an-toby tokoa ianao.” Dia nidina izy sy Pora mpanompony ka nankany an-tsisin’ilay toby, izay nisy olona efa voalahatra hiady. 12 Nitoetra tany amin’ny lemaka iva ny Midianina sy ny Amalekita ary ny Tatsinanana rehetra,+ sady maro be tahaka ny valala.+ Ary tsy hita isa ny ramevany,+ fa maro be toy ny fasika eny amoron-dranomasina. 13 Ary tonga tao i Gideona, ka injay fa nisy lehilahy iray nitantara nofy tamin’ny namany, nanao hoe: “Nanonofy+ aho hoe: Nisy mofo boribory natao tamin’ny vary orza, nikodiadia nanketo amin’ny tobin’ny Midianina. Ary tonga hatreny amin’ny tranolay anankiray ilay izy, dia nandona an’ilay tranolay, ka nampianjera azy.+ Avy eo, dia natsimbadik’ilay mofo ilay tranolay, ka nirodana tanteraka.” 14 Dia hoy ny navalin’ilay+ namany: “Koa inona moa fa tsy ny sabatr’i Gideona+ zanak’i Joasy, lehilahy israelita, izany! Efa natolotr’ilay tena Andriamanitra+ eo an-tanany ny Midianina sy ny toby rehetra.”+ 15 Raha vao ren’i Gideona ilay nofy sy ny dikany,+ dia niankohoka+ izy. Ary niverina tany amin’ny tobin’ny Israely izy, ka niteny hoe: “Mitsangàna,+ fa efa natolotr’i Jehovah eo an-tananareo ny tobin’ny Midianina.” 16 Dia nozarainy ho telo toko izy telonjato lahy, ka samy nomeny anjombona+ izy rehetra hotazoniny eny an-tanany, ary koa siny lehibe tsy nisy na inona na inona, sy fanilo hatao ao anatin’ireo siny. 17 Hoy koa izy tamin’ireo: “Jereo aho, ka ianaro izay hataoko, ary manaova sahala amiko. Ary rehefa tonga eo an-tsisin’ny toby aho, dia izay hataoko no hataonareo. 18 Koa rehefa mitsoka anjombona izaho sy izay rehetra miaraka amiko, dia tsofy koa ny anjombonareo, manodidina ny toby,+ ka mitenena hoe: ‘An’i Jehovah+ sy Gideona!’” 19 Ary tonga teo an-tsisin’ny toby i Gideona sy ny zato lahy niaraka taminy, rehefa nanomboka ny fotoam-piambenana teo antenatenan’ny alina.+ Vao avy nosoloan’ny Midianina ny miaramila mpiambina tamin’izay. Dia nitsoka anjombona+ ry Gideona, ary nopotipotehiny ny sinin-drano lehibe teny an-tanany.+ 20 Dia samy nitsoka ny anjombony+ sy namotipotika an’ireo siny lehibe izy telo toko. Ary noraisin’izy ireo tamin’ny tanany havia ny fanilo, fa ny tanany havanana kosa nihazona ny anjombona hotsofiny. Dia niantso mafy izy ireo hoe: “Sabatr’i Jehovah+ sy Gideona!” 21 Nandritra izany rehetra izany, dia samy nijanona teo amin’izay nisy azy, nanodidina ny toby, izy ireo. Koa nihazakazaka ny rehetra tao an-toby, ary velona ny horakoraka, dia vaky nandositra+ izy rehetra. 22 Ary mbola nitsoka ny anjombony+ foana izy telonjato lahy.+ Dia nataon’i Jehovah nifamely tamin’ny sabatra ny eran’ny toby.+ Koa nisy nandositra hatrany Beti-sita sy Zereraha ny tao an-toby, ka tonga hatrany amin’ny sisin’i Abela-mehola,+ any akaikin’i Tabata. 23 Nandritra izany fotoana izany, dia novorina ny lehilahy israelita avy tamin’ny fokon’i Naftaly+ sy Asera+ ary Manase+ manontolo, ka nenjehin’izy ireo+ ny Midianina. 24 Ary nandefa iraka eran’ny faritra be tendrombohitr’i Efraima+ i Gideona, nanao hoe: “Midìna mba hifanandrina amin’ny Midianina, ary ataovy izay hahatongavana alohan’izy ireo hatrany Beti-bara sy ny Reniranon’i Jordana, ka ametraho olona eo amin’ireo toerana fiampitana.” Koa novorina ny lehilahy efraimita rehetra, ka nametrahany olona teo amin’ireo toerana fiampitana+ hatrany Beti-bara sy ny Reniranon’i Jordana. 25 Dia tratran’izy ireo koa ny andrianan’ny Midianina roa lahy, dia i Oreba sy Zeba.+ Ary i Oreba novonoiny teo amin’ny harambaton’i Oreba,+ fa i Zeba kosa novonoiny tao amin’ny famiazam-boalobok’i Zeba. Ary mbola nenjehin’izy ireo ny Midianina.+ Dia nentiny tany amin’i Gideona, tany amin’ny faritr’i Jordana, ny lohan’i Oreba sy ny lohan’i Zeba.+